Ịchekwa ma na-echebe gị faịlụ dị oké mkpa. Ị nwere ike ida a otutu mkpa videos, foto na data. Ịchekwa ya na gị na desktọọpụ bụ ihe kacha njọ ị pụrụ ime. Ọ bụrụ na a virus ife efe gị na kọmputa, ma ọ bụ gị sistemụ mebiri emebi, ị ga-atụfu gị niile data. Na-ere ọkụ ya na a DVD bụ mma ngwọta, ma ọ bụghị zuru okè dị ka mma. Ndị kasị mma, bụ bulite gị faịlụ na iCloud. Ọ bụ ngwa ngwa na gị faịlụ a ga-echebe. Ọzọkwa, i nwere ike ịkọrọ ha na ndị enyi gị. Nke a pụtara na ị ga-eji niile uru nke iCloud. N'ụzọ dị mwute, bụ isi atụmatụ adịghị enye a otutu ohere. Ọ bụrụ na anyị maara na taa ngwaọrụ-eme ka videos na-achọ a otutu ohere, ị ga-mkpa nweta nkwalite gị atụmatụ, emecha.
Patr1: Olee ịkọrọ / bulite iMovie videos ka iCloud on Mac
Part2: Olee ịkọrọ / bulite iMovie videos ka iCloud on iPhone / iPad
Part1: Olee ịkọrọ / bulite iMovie videos ka iCloud on Mac
E nweghị ebe bulite ọ bụla faịlụ ka iCloud. Ị nwere ike iji akpaka iCloud ebugote. Nke a pụtara na ọ bụla faịlụ ị na-emeghe ma ọ bụ mepụta na iMovie, a ga-uploaded ka iCloud. Iji na-eji nke a mma, ị ga-eme ka ya. Ọ bụ ya mere bara uru nke a otutu ọrụ na-eji ya kwa ụbọchị. Ọ na-eliminates ize ndụ nke mmadụ na mberede ihichapụ a faịlụ, nke e uploaded ka iCloud. iOS ga-echefu bulite gị ọrụ a.
1. Gaa Apple menu ma chọta System Mmasị. Chọpụta iCloud na pịa ya. Ị ga-aka ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị, banye na ma ọ bụ mee akaụntụ na iCloud. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịlele Documents & Data checkbox. Ọ bụrụ na ị na-adịghị na otu akaụntụ, ị pụrụ ime ka ya. Ị nwere ike Google iCloud na aha ha na website. Nke a bụ a dị mfe ọrụ na-achọ a di na nwunye nke nkeji.
2. Pịa na nhọrọ nso Documents & Data. E, ị ga-elele IMovie. Nke a pụtara na ị chọrọ bulite faịlụ site na IMovie ka iCloud. Ọ bụrụ na a nhọrọ na-adịghị enyocha, ego ya ugbu a. Ị ga-ahụ ndị ọzọ omume dị ka mma. All mmemme na-enyocha, ga-bulite faịlụ ka iCloud akaụntụ. Ị nwere ike ịnweta ha ọ bụla oge ị chọrọ. Ọzọkwa, ndị enyi gị nwere ike ghara gbanwee ma ọ bụ ihichapụ ha. Cheta na ọ bụrụ na ị na-eji a otutu omume, ị ga-mkpa a otutu ohere na iCloud.
3. Gaa iMovie ma chọta Mmasị. E nwere, ị ga-ahụ na "akpaghị aka bulite ọdịnaya gaa na iCloud" nhọrọ. Ego ya na ị na-eme. Ị nwere ike iwepu a nhọrọ na otu ụzọ. Ugbu a, ọ bụla faịlụ na-kere na IMovie, a ga-uploaded ka iCloud. Ị gaghị ida a faịlụ mgbe ọzọ. Adịghị enye gị adreesị email gị na paswọọdụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime ha na-eji gị iCloud akaụntụ na iMovie, ọ ga-bulite faịlụ na akaụntụ. Na nke a, a onye nwere ike ịnweta ma hichapụ faịlụ gị. Akpaghị aka bulite ọdịnaya gaa na iCloud bụ a bara uru nhọrọ, ma ọ na-achọ ndị ọzọ ohere na gị iCloud akaụntụ. Ọ bụrụ na ị ka a otutu oru ngo na ihe IMovie, ị ga-mkpa ọzọ ohere na akaụntụ gị.
4. Ugbu a, i nwere ike ịkọrọ ndị a faịlụ. Ihe niile ị chọrọ ime bụ pịa na Share button na gị Mac kọmputa na-ahọrọ "Share Link site iCloud." Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ ịkọrọ site Facebook, Twitter na wdg Cheta na ị ga-enye ozi ndị ọzọ banyere gị faịlụ. Mgbe ị na-ahọrọ nhọrọ, gosi na ị na-eme. I nwekwara ike iṅomi njikọ. Nke a bụ uru ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịkọrọ gị faịlụ na blọọgụ ma ọ bụ forums. Cheta na mmadụ nile ga-enwe ike ịhụ gị faịlụ. Ọ bụrụ na ị nwere onwe faịlụ na ọmụma, zere emekọrịta amaghị ndị mmadụ.
Ọtụtụ ọrụ na-eji IMovie na ha iPhones na iPads. Ọ bụ ezie na, ọ dịghị nwere otu nhọrọ dị ka a na kọmputa version, IMovie maka IPhone na iPad nwere ike ime ka mkpa mgbakwunye na mgbanwe gị videos. The interface bụ nnọọ mfe iji na ya anya na-akpali. Nke a bụ ihe dị mkpa mgbakwunye na iOS 8 na 9. okenye na nsụgharị, dị ka iOS 6 adịghị ihe na-akpali interface. Ị ga-bulite faịlụ ka iCloud. Iji na-eme nke a, ị ga-enwe akaụntụ na iCloud. Ọzọkwa, ị ga-aka. Ọ bụrụ na-adịghị na otu akaụntụ, aha si ngwa ma ọ bụ na ukara website.
1. The nzọụkwụ mbụ bụ bulite iMovie videos ka iCloud. Ị ga-eme ya site na ịpị iCloud bọtịnụ. Ọ na-emi odude ke isi menu. Gị video ga-uploaded na iCloud.
2. Ugbu a, i nwere ike ịkọrọ gị videos. Ihe niile ị chọrọ ime bụ enweta na a oru ngo ị chọrọ ikere òkè na enweta na òkè bọtịnụ. Họrọ iCloud nkekọrịta na-ahọrọ album ị chọrọ ikere òkè.
3. Họrọ kọntaktị ị chọrọ ịkọrọ a faịlụ na na ị na-eme. Ha ga-enwe ike ịhụ gị faịlụ. Ọ bụ nnọọ ngwa ngwa na ụzọ dị mfe iji ịkọrọ faịlụ na ndị enyi gị. Ke adianade do, ị nwere ike itinye ndị ọzọ na a nkọwa.
Uploaded faịlụ nwere ike ju, na-akọrọ ma ọ bụ ehichapụ. N'ezie, naanị gị ga-ndị a na nhọrọ. Enyi gị nwere ike na-ahụ ndị faịlụ. Ọzọkwa, iCloud nchekwa bụ ihe kasị mma na kasị dịrị nchebe ụzọ iji chebe gị faịlụ. Ọ dịghị onye nwere ike ihichapụ ha, ma e wezụga gị. Otú ọ dị, nchekwa na iCloud bụghị free. Nke a pụtara na ị ga-ahọrọ ụfọdụ atụmatụ na suut gị. The ọzọ ohere gị mkpa, ihe ego ị ga-mkpa.
Mgbe gị na faịlụ na-uploaded ka iCloud, ị nwere ike ịnweta ha site na kọmputa gị, IPhone, Emmanuel ọ bụ ngwaọrụ ọzọ. Ị ga-abanye na akaụntụ gị iji na-enwe ike ibudata, ele ma ọ bụ hichapụ a faịlụ. Cheta na ị nwere otu nhọrọ ka ihichapụ a faịlụ site iCloud, site na ngwaọrụ gị ma ọ bụ site n'ebe nile. Ehichapụ faịlụ-apụghị weghachiri eweghachi. Ọzọkwa, ịkpachara anya mgbe ị na-enye na ngwaọrụ gị a. Ọ bụrụ na ị na-aka na na iCloud akaụntụ, a onye ga-enwe ohere gị faịlụ.
> Resource> iMovie> Olee ịkọrọ iMovie video ka iCloud